Izvo zvigadzirwa zvekugadzira zveApple Watch Edition zvinogona kusiyana gore rega rega Ndinobva mac
Izvo zvigadzirwa zvekugadzira zveApple Watch Edition zvinogona kusiyana gore rega rega
Mazuva anopfuura uye isu tinodzidza rumwe ruzivo rwakanangana neApple Watch Edition. Sezvaunoziva, Apple yakaunza iyo Apple Watch Series 2, iyo Apple Watch Series 1, iyo Apple Tarisa Nike +, iyo Apple Tarisa Hermès uye nyowani Shanduro yeApple Watch.
Kana zviri zveApple Watch Edition, idzo dzekambani yeapuro yakarumwa dzakasarudza kusendeka mhando dzakagadzirwa negoridhe uye idzo dzaive nemitengo inosvika pamusoro pe15000 euros, kuzvigadzira mune zvedongo zvinhu zvakafumiswa nealuminium.
Nekudaro, ichi handicho chega chinhu chatinofanira kuziva maererano neiyo nyowani Apple Watch Edition modhi uye zvinoita sekunge iwo Edhisheni mamodheru mawachi anozoshandura zvigadzirwa zvekugadzira gore rega rega kuti zviite zvechokwadi. Kana tichitaura nezvega isu tinoreva kuti zviuru zvevanhu hazvina mhando yega yeApple Watch Edition uye ndiko kuti mutengo wazvino, muzvinhu zvedongo, haurambidze seApple Watch Edition mugoridhe uye saka vangangove vatengi kune vazhinji zvimwe kukwanisa kurasikirwa nehunhu hwe «yakasarudzika».
Ndokusaka Apple yakwanisa kushandura zano rayo uye yafunga kuti wachi yeApple Watch Edition yakasarudzika pamutengo wainayo, asi nezvechinhu icho chakagadzirwa uye nenguva iyo wachi imwe neimwe iri kutengeswa. Kana tikatora zvese izvi kufunga, tinenge takatarisana nemamiriro ezvinhu asina kujairika uye zvinogona kunge zviri izvo Apple inoronga kuvhura Apple Watch Edition gore rega rakagadzirwa nezvinhu zvakasiyana senge titanium, platinum uye mvura yesimbi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Izvo zvigadzirwa zvekugadzira zveApple Watch Edition zvinogona kusiyana gore rega rega
Spartan Pro Antivirus Yemahara kune Yakatemwa Nguva
Patent iyo inotiratidza MacBook ine LTE yekubatanidza